I-Casa Jardin de Osa 180° Ukubonwa kolwandle - I-Airbnb
I-Casa Jardin de Osa 180° Ukubonwa kolwandle
Izinto eziyimfihlo - Intsapho ebiyelweyo (ifuna i-4x4/SOLO 4x4) - Ijikelezwe Yindalo - Ukubuka Ulwandle Okukhethekileyo- Indlu Yodidi Oluphezulu
Indawo yethu likhaya elimnandi elinazo zonke izinto ezidingekayo ukuze ukonwabele ukuhlala kwakho. Silungiselele ukuba sihlale kuyo kungekudala, eyakhiwe ngothando nangokuvumelana.
Jonga AMAXABISO ETHU APHANTSI ngexesha lonyaka eliluhlaza!
I-Casa Jardín de
Osa Wamkelekile kwindawo ophupha kuyo. Eli khaya litofotofo liphezulu kunxweme oluhle loMzantsi weCosta Rica. Uza kufumana iindawo zokusefa ezikumgangatho wehlabathi eDominical kunye nendalo entle yeMarino Ballena National Park eUvita. Ungafika apho ngemizuzu eyi-45 xa usuka kwisikhululo seenqwelo-moya iQuepos. Ukusuka kwi-Costanera Sur Highway yimizuzu eyi-20 xa uqhuba induli.
Indawo ekwi-400M/1300ft ngaphezu kolwandle inika amaqondo obushushu avuyisayo kunye nokuphola elwandle rhoqo. Iindawo ezikujikelezileyo zenza ukwazi ukubona izilwanyana zasendle ezininzi, ihlathi kunye neentaba ezintle. Hlala ujonge iminenga eyophula ulwandle, iinkawu, iinkawu nezinye izilwanyana ezintle emithini.
Kwindawo ekufutshane nayo kukho imilambo, iingxangxasi kunye nolwandle apho unokuzonwabisa khona ngezinto ezenziwayo ezifana nokuloba, ukuhamba ngephenyane, ukuhamba ngephenyane, ukuhamba ngephenyane emanzini amhlophe, ukukhenketha emkhenkceni, ukukhwela amahashe, ukubukela iminenga, kunye nokuvuselela izilwanyana zasendle. E-Uvita ekufutshane naseDominical uza kufumana yonke into oyifunayo njengoko kukho ukutya okuninzi, amayeza, iinkonzo zonyango, iivenkile zokutyela, iivenkile zekofu, iibhanki, izikhululo zegesi kunye namaziko enkcazelo yabakhenkethi.
ICasa Jardín de Osa yindlu eyakhiwe ngendlela ekhethekileyo neyakhiwe ngezandla, eyenziwe ngamaplanga asemaphandleni kusetyenziswa eyona migangatho iphakamileyo. Eli khaya liquka ubuhle bemvelo kunye nesitayile sale mihla. Yeyona ndawo ifanelekileyo yabantu abathandana nomtshato, iintsapho namaqela amancinci.
Le ndlu ivuleke kakhulu ibe ipholile umoya. Umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu uyafumaneka, kodwa akufuneki kakhulu. Ikhitshi linomatshini wokuhlamba izitya, zonke izixhobo ezifunekayo zasekhitshini kunye neenkcukacha ezininzi ezikwenza uzive usekhaya ngoko nangoko. Igumbi elisetyenziswa ngumntu wonke lineminyango emikhulu esilayidayo, evulekileyo kwiveranda, edibanisa imigca phakathi kwangaphakathi nangaphandle. Unokonwabela ukubukwa kwe-180 ° kwindawo yethu yokubraya ejonge ipuli ebonakala ingenasiphelo okanye wonwabele ukubukwa okungapheliyo ngaphaya kolwandle ngokusuka esofeni. Zonke iifestile neengcango zinezikrini zezinambuzane ezikuvumela ukuba wonwabele ingokuhlwa unoxolo. Le ndlu ixhotyiswe nge-intanethi ekhawulezayo kunye ne-satellite TV. Into yokukhusela umlilo ikhusela izinto zakho ezixabisekileyo ngexesha lokuhlala kwakho.
Kukho amagumbi okulala ayi-2 anamagumbi aliqela, ngalinye linebhedi enkulu kanokutsho, umntu ngamnye u-A/C kunye neefeni zesilingi. Igumbi lokuhlambela kunye nekhitshi elisetyenziswa nangabanye abantu linamanzi ashushu ngento yokufudumeza ilanga. Ukuba kuyimfuneko sinokubonelela ngomatrasi ompontshwayo weendwendwe ezongezelelekileyo.
Ukuze sikhuseleke kakhulu, sikwindawo ebiyelweyo, ekwindawo enamagumbi okuzilolonga, inkundla yentenetya, ihelicopter landing pad, kunye nendawo yepikiniki. Yonke into inokugcinwa kwi-intanethi kwangaphambili ukuze ungasokoli.
Yonke le nkcazelo, nokunye, iza kunikezelwa kukhenketho lokwamkela xa ufika eCasa Jardín de Osa. Qaphela ukuba kufuneka imoto eyi-4x4 ukuze ufikelele kwintsapho yethu ebiyelweyo iCosta Verde Estates.
4.93 · Izimvo eziyi-96
Sikwintsapho enabantu abaninzi, apho izinto eziyimfihlo nokhuseleko zibaluleke kakhulu. Awuzukuyikholelwa into yokuba imbonakalo emangalisayo yamatye kunye nemifula kwicala elinye kunye nolwandle oluhle olujonge kwelinye icala, ude uyibone!
Le ndlu ilawulwa Ngumphathi Wendlu ohlala kuloo ndawo, uthetha isiNgesi nesiSpeyin ngokutyibilikayo. Uza kuba ngowokuqala ukuqhakamshelana nawe xa ufika naxa uphuma, kodwa ungaqhakamshelana nathi ngokukhululekileyo (abanikazi) nanini na ufuna, thatha nje amanqaku esikuyo kwiiyure eziliqela kwangaphambili, ngoko kungathatha ixesha ukuphendula.
Le ndlu ilawulwa Ngumphathi Wendlu ohlala kuloo ndawo, uthetha isiNgesi nesiSpeyin ngokutyibilikayo. Uza kuba ngowokuqala ukuqhakamshelana nawe xa ufika naxa uphuma, kodwa ungaqhak…